Sawirka toddobaadka -
Posted By: KongoLisolowaa: May 23, 2020 00: 30 No Comments
Mustaqbalka wuxuu leeyahay magacyo dhowr ah: kuwa itaalka daran, waxaa loo yaqaannaa kuwa aan la gaari karin; xishoodka / xishoodka, waxa loogu yeedhaa waxa aan la garanayn; fikirka iyo geesinimada, waxaa loogu yeeraa fursad ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 16, 2020 00: 25 No Comments
11 Haddaad ku aragtid naag qurux badan oo maxaabiista dhexdooda ah, oo aad iyada ku jeclaatid oo aad guursatid naag. 12 Haddaba gurigaaga waad soo gelisaa, iyadu way xiiraysaa ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 9, 2020 00: 30 No Comments
Maxaa DRCongo: Qofkasta oo ku lug leh siyaasada waxaa loogu magac daray "Mudanekiisa"? Muxuu mudan yahay cinwaanka "heerkiisa ugu sarreeya" Xitaa haddii mid yahay xirfad barasho xirfad shaqo ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 2, 2020 00: 30 No Comments
Waa maxay taas xayeysiinta? Laakiin, yaa daryeela isgaarsiinta iyo Suuqgeynta shirkadan caanka ah Dove ?? Waa tan meherad ay tahay in Human Rights Watch ay baaritaan ku sameyso ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 25, 2020 00: 30 No Comments
Hadhaagahan ka yimaada bulshada reer yurub waa inay iskaga tagaan jidhkeena cusub. Waa dembi markay damcaan gumaysiga iyo dalxiiska galmada; inay joojiyaan dhaqamadaas ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 18, 2020 00: 25 No Comments
Si taas loo gaadho, Abdoulaye Gueye wuxuu noo sharxayaa in maamulkii gumeystaha uusan dhammaan afarta jiho. Waxaa si fudud loogu xadiday maalgelinta iskuulada howlgalka ... Akhri wax dheeraad ah